यी सामानहरू बेचेर गर्नुहोस् दशैँमा राम्रो आम्दानी!
Photo Source : The Kathmandu Post
नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ नजिकिँदै छ। बजारमा लुगा, जुत्ता, सजावटका सामाग्री, खानेकुरा आदिको किनमेल सुरु भइसक्यो। यो सामान बिक्ने बेला हो। दशैँको किनमेल प्राय: सबै घरका सदस्यले गर्ने भएकाले यसबेला व्यापारीहरूले थुप्रै सामाग्री बेचेर फाइदा लिन सक्छन्। वा गरिरहेको व्यवसायमा पनि दशैँ विशेष सामाग्रीहरू ल्याएर बेच्दा फाइदा लिन सजिलो हुन्छ। दशैँमा के-के सामान बेच्न सकिएला त? के के मा राम्रो फाइदा छ? यो लेखमा हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ।
लुगा: दशैँमा धेरैले नयाँ लुगा लगाउँछन्। झन बच्चाबच्चीलाई दशैँ आएपछि नयाँ लुगा नकिनी हुँदैन। यसै कारणले पनि दशैँ आउनु अघि नै बजारमा लुगा किन्नेको धेरै भिड लाग्ने गर्छ। त्यसैले दशैँमा लुगा बेचेर निकै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। बजारमा कुन डिजाइनको लुगा बढी चलेको छ त्यसलाई ख्याल गरेर वा दशैँ विशेष लुगाहरू राखेर बेच्ने हो भने राम्रो व्यापार हुनसक्छ। मार्ट वा सामान्य पसल संचालन गरिरहनुभएको छ भने पनि दशैँको लागि मात्र भनेर होलसेलबाट लुगा ल्याएर बेच्न सक्नुहुन्छ।
चङ्गा: दशैँमा विशेष बिक्री हुने चिज भनेको चङ्गा हो। यो अरुबेला त्यति बिक्दैन। दशैँमा आफ्नो जे जस्तो व्यवसाय भएतापनि पसल अगाडी चङ्गा झुन्ड्याएर राख्नुभयो भने बिक्री हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। साना केटाकेटीहरूलाई चङ्गा उडाउने रहर हुन्छ। यसबेला उनीहरूको चङ्गा उडाउने प्रतियोगिता चल्ने गर्छ। जसका कारण दशैँमा चङ्गा राम्रै बिकेको देख्न सकिन्छ। चङ्गासँगै लट्टाइ र धागो राख्न नभुल्नुहोला।
पूजा सामाग्री: अबिर, केसरी, फूलहरू, प्रसाद, अगरबत्ती, दुर्गाको फोटो आदि पूजा सामाग्रीहरू दशैँमा प्रयोग हुन्छन्। यी सामाग्री नभई दशैँ सम्पन्न हुँदैन। सबै घरमा पूजा हुने भएकाले दशैँमा यी कुराहरू नबिक्ने कुरै आउँदैन। त्यसैले दशैँमा पूजा सामाग्री बेचेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ।
जुत्ता: दशैँमा जुत्ता किन्ने ग्राहकहरू पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन्छन्। चलेका ब्राण्डअनुसारको जुत्ता राखेर दशैँमा राम्रो व्यापार गर्न सकिन्छ। विशेषगरी नेपालकै चर्चित गोल्डस्टार, हात्ती छाप जस्ता ब्राण्डका सामानहरू बेन्च सकिन्छ। साथै चाइनिज जुत्ताहरूको पनि माग राम्रो नै हुन्छ।
जमरा: दशैँमा टिका सँगसँगै जमरा पनि लगाउने चलन छ। सहरमा व्यस्तता वा अरू कुनै कारणले जमरा राख्न नभ्याएकाहरूले किनेर लगाउने गर्छन्। त्यसैले दशैँमा जमरा बेचेर पनि फाइदा लिन सकिन्छ।
मासु: दशैँमा मासु नपाक्ने घर बिरलै हुन्छन्। खसी तथा बोकाको माग नपुगेर विदेशबाट पनि ल्याउने गरिन्छ। अरुबेलाको भन्दा यसबेला खसीको भाउ बढेको हुन्छ। मासु पसल खोलेर वा फ्रिज भएको ठाउँ हो भने मासु स्टोर गरेर पनि बेच्न सकिन्छ।
फलफूल: दशैँमा आफ्ना नातागोता इष्टमित्र भेट्न जाँदा फलफुल लगिदिने चलन छ। त्यस्तै पूजा गर्दा भगवानलाई चढाउन र घरमै खानका लागि पनि फलफूल किनिन्छ। स्याउ, केरा, अम्बा, सुन्तला आदि फलफुलको दशैँमा राम्रो व्यापार गर्न सकिन्छ।
तपाईँलाई बडादशैँको धेरैधेरै शुभकामना।